ရိုဟင်ဂျာပြဿသနာ အဖြေရှာခြင်း… ရာစုနှစ် တဝက်ကျော်လောက် ခွဲခြား..ဖိနှိပ်..ချုပ်ချယ်ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ…အစ္စလာမ်ဖြစ်နေလို့ပါ… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Not only Rohingyas but the remaining 12 millions of Myanmar Muslims are also facing similar atrocities under RACIST MYANMAR
Let’s startauniversal campaign against Myanmar Hatemongers »
ရိုဟင်ဂျာပြဿသနာ အဖြေရှာခြင်း… ရာစုနှစ် တဝက်ကျော်လောက် ခွဲခြား..ဖိနှိပ်..ချုပ်ချယ်ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ…အစ္စလာမ်ဖြစ်နေလို့ပါ…
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ…အခြေအနေတွေဟာ…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်…အလွန်အင်မတန် ဆိုးယွားနေပါတယ်…ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ…ရာစုနှစ် တဝက်ကျော်လောက် ခွဲခြား..ဖိနှိပ်..ချုပ်ချယ်ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ…အစ္စလာမ်ဖြစ်နေလို့ပါ….ပြည်တွင်းက မြန်မာမွတ်စလင်များ အတွက်လည်း…လက်ရှိအခြေအနေတွေဟာ…တော်တော်ဆိုးနေပါတယ်…
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေလို့…နေ့စဉ်နဲ့အမျှရန်စခံနေရပြီးတော့…လူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်… အသတ်ခံရမဲ့ဘေးကို…နေ့စဉ်..စိုးရိမ်နေရပါတယ်….ဥပဒေအရ…အကာအကွယ်လုံးဝမရဘဲ …ပြောင်း ပြန်အရေးယူမှုတွေကိုဘဲ…ခံနေရပါတယ်…
ရိုဟင်ဂျာပြဿသနာ အဖြေရှာခြင်း…..
-လွယ်လွယ်ကူကူဘဲပြောလိုက်ကြတယ်….ရိုဟင်ဂျာ ပြဿသနာအဖြေရှာခြင်း…လို့…
ဒုက္ခရောက်နေကြတာက…ရိုဟင်ဂျာတွေရော…ပြည်မမှာရှိနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေရော…တခြား တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေတင်မက…အုပ်ချုပ်သူ…ဗမာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ သဘောထားမတူတဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေပါ…ပါနေပါတယ်…အဖိနှိပ်ခံနေရပါတယ်…အခွဲခြား..အနှိပ်စက်ခံနေကြရပါတယ်
ဒီအထဲမှာ…ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ အတူ…ဆိုးဆိုးယွားယွား…ခွဲခြားဖိနှိပ်ရန်ပြုခံနေရတာ…ပြည်တွင်းက မြန်မာမွတ်စလင်တွေဖြစ်ပါတယ်…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အပေါ်…အစိုးရက… ဝီရသူ တို့ ပညာဝရတို့…ပါမောက္ခတို့လို…ဘုန်းကြီးဆိုးတွေကို…မဘသ ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင် ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီး…အချိန်နဲ့အမျှတိုက်ခိုက်နေသလို…နေမျိုးဝေ…တို့လို..လူတွေကို…ကြံ့ခိုင်ရေး နဲ့ စစ်တပ်/အစိုးရကပါအကာအကွယ်တွေပေး…လက်သပ်မွေးထားပြီး…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို ရန်ရှာ…တိုက်ခိုက်ခိုင်းထားပါသေးတယ်….
ဒီဘုန်းကြီးဆိုးတွေနဲ့…ကလေကချေတွေကို…သူတို့နောက်လိုက်တွေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးတွေ…စစ်တပ်လူ တွေ… အစိုးရလူတွေ ကတင်…ထောက်ခံနေတာမဟုတ်ပါဘူး…ဒီမိုကရေစီကို လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ အတိုက်အခံတွေကပါ…ထောက်ခံပြီး…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို…ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက် ရန်ရှာနေ ကြတာပါ….
ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ…နိုင်ငံကို…စွန့်ခွာထွက်ပြေးမှုတွေဖြစ်လာရပါတယ်… အဲ့ဒီလို နိုင်ငံစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူတွေဟာ…ထိုင်းနိုင်ငံ…မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့…အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွေကို လာရောက်ခိုလှုံနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်…UNHCR ကနေ….ဒုက္ခသည်များကို…ကူညီစောင့်ရှောက်ပါ တယ်…ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့…အလုပ်တွေလုပ်လာကြပါတယ်…
ဒုက္ခသည်တွေကို…ကူညီနေတယ်ဆိုပေမဲ့….ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ဘဝတွေ…အခြေအနေတွေဟာ…ဒုက္ခသည်ဘဝမှာဘဲရှိစေတဲ့စီမံချက်တွေဘဲ…တွေ့နေရပါတယ်…UNHCR…က တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု ခြင်းခံထားရတဲ့ လူတွေရဲ့ အခြေအနေကို…တင်ပြပါ့မယ်….
UNHCR ရဲ့ ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်ထားသူများဟာ…မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာ တရားဝင်…အလုပ်..လုပ်ကိုင်ခွင့်…မရှိကြပါဘူး…မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမှ…ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး… တရားဝင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ထုတ်မပေးပါဘူး…တရားဝင်ပညာသင်ကြားခွင့်မရကြပါဘူး…
UNHCR က…အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များ၏ စား ဝတ် နေရေးအတွက်…ထောက်ပံ့မှု.တစုံတရာ မရှိပါဘူး… ကျန်းမာရေးအတွက်…ထောက်ပံ့မှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့သော်လည်း…ယခု…ရံပုံငွေလျော့နည်းလာမှုကို အကြောင်းပြ၍…လုံးဝဖြတ်တောက်လိုက်ပါပြီ… ကဒ်ပြားတခု..ပေးလိုက်ပြီးတော့ …နေချင်တဲ့နေရာ သွားနေ…စားချင်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်ခိုးလုပ်စား…ကိုယ့်ရောဂါကိုယ်ကု…မှီခိုသူ သားသမီးတွေလည်း.. ပညာမတတ် ကလေကချေတွေဖြစ်ကြဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပစ်ထားလိုက်တာပါ…
ထိုင်းနိုင်ငံက လူကုန်ကူးသမားတွေကို…ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းမရှိသေးမှီအချိန်အထိ…ရိုဟင်ဂျာ လှေစီး ဒုက္ခသည်အများအပြားရောက်ရှိနေခဲ့ကြပြီး…UNHCR မှ အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲ…နေထိုင်နေကြ သလို…ပြည်မနေ မြန်မာမွတ်စလင်များလည်း…အများအပြားရောက်ရှိပြီး…တရားမဝင်နေထိုင် လျှက်ရှိ နေပါတယ်…
ဒီလို…အရေအတွက်…မြောက်များလှစွာသော…တရားဝင်ဒုက္ခသည်များနှင့် တရားမဝင် ဒုက္ခသည်များ ဟာ…လက်ခံထားရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံအတွက်…အစစအရာရာမှာ…အနှောက်အရှက်…ဝန် ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်လာရပါတယ်…
တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသူတွေကို…တတိယနိုင်ငံများသို့ ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း… မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာ… ၁၀နှစ်…၁၅နှစ်လောက်နေထိုင်ပြီးသူတွေသာ…တတိယနိုင်ငံသို့…အခြေချဖို့… ခေါ်ယူနေတာ…တွေ့နေရပါတယ်…
တတိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာရသူတိုင်းဟာ…နှစ်ပေါင်းများစွာ…မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်စောင့်ဆိုင်း နေစဉ်အတွင်း…အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်…မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေတွေကို ချိုးဖာက်ပြီး.. အလုပ်တွေခိုးလုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်…သားတွေသမီးတွေကို…ပညာမဲ့ဘဝနဲ့…အလုပ်ကြမ်းသမားတွေ… ဖြစ်စေခဲ့ရပါတယ်…
ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ…လူအမျိုးမျိုး…စိတ်အထွေထွေပါတာကြောင့်…ခိုးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာ…ရာဇဝတ်မှုနဲ့ ညိစွန်းတဲ့အလုပ်တွေလည်း…ပါလာပါတော့တယ်…လောင်းကစားလုပ်ငန်း…မူးယစ် ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း…လုပ်ငန်းတွေမှာ…အလွန်အသုံးတဲ့..တဲ့လူတန်းစားတွေဖြစ်လာကြပါတယ်…
ပညာသင်ကြားခွင့် မရကြတဲ့လူငယ်တွေကို…အခြား ဥပဒေပြင်ပက..အလုပ်တွေ..လုပ်ခိုင်းဖို့… သင်ကြားပြသရတာက အလွန်လွယ်ကူလှပါတယ်…ဒီ့အတွက်…မလေးရှားတနိုင်ငံလုံးမှာ…လုယက်မှု လူသတ်မှု…ခိုးမှု…လိမ်လည်မှု…ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှု…မူးယစ်ဆေးဝါးမှုတွေ…တိုးပွားလာခဲ့ရတယ်လို့…ဆိုလျှင်…မှားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး…
ဘာကြောင့်များ…မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေဟာ…မလေးရှားနိုင်ငံကိုဘဲ ဦးတည်ပြီးလာနေကြတာပါ လဲ…
ဒီလို အခြေအနေမှာ….အစ္စလာမ်နိုင်ငံတခုမှာတော့…အနိမ့်ဆုံး…ဘာသာတူတဲ့အနေနဲ့…အခွင့်အရေး တွေရမှာဘဲလို့ ယုံကြည်ပြီးလာခဲ့ကြတာပါ…နောက်နောင်…မြန်မာပြည်ကို…စွန့်ခွာလာသူတွေရှိဦးမယ် ဆိုရင်လည်း…မလေးရှားနိုင်ငံကိုဘဲ…ဦးတည်ပြီးလာကြဦးမှာပါဘဲ…
ရိုဟင်ဂျာပြဿသနာတခုထဲ ကြည့်ပြီး…ဖြေရှင်းလို့ မရပါဘူး…ရိုဟင်ဂျာတွေရော…မြန်မာမွတ်စလင်တွေ ရောအားလုံးရဲ့ ပြဿသနာကိုဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်….ခန့်မှန်းခြေအရ…မြန်မာနိုင်ငံမှာ…မွတ်စလင် ဦးရေ ဆယ့်သုံးသန်းကနေ…ဆယ့်ငါးသန်းအထိရှိမယ်လို့…ဆိုကြပါတယ်….ရိုဟင်ဂျာဦးရေက…၂သန်းခွဲ…သုံးသန်း လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်…ကျန် မွတ်စလင်ဦးရေက…ဆယ်သန်းပတ်ဝန်းကျင်…ရှိနေပါလိမ့်မယ်…
လူ ဘယ်နှစ်သန်းလောက်ကို…ယာယီလက်ခံထားပြီး…UNHCR အစီအစဉ်နဲ့…တတိယနိုင်ငံကို ပို့ဖို့ လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ…
အရေးအကြီးဆုံးက…လူတွေ…ထွက်ပြေးလာခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီး…နောက်ထပ်လူတွေ ထွက်မလာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းသည်သာ…အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းခြင်း..ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ…ဒုက္ခသည်တွေကို…လက်ခံထားမယ်…တတိယနိုင်ငံကို…ပို့မယ်ဆိုတဲ့နည်းနဲ့သာ…ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်…ဒီကနေ့…လူတသိန်းကို…ဖြေရှင်းပေးလိုက်…မနက်ဖန်…နောက်ထပ်…လူနှစ်သိန်း ထပ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်…သဘက်ခါမှာ…လူ သုံးသိန်းလောက်ရောက်လာပါလိမ့်ဦးမယ်…
ဒီကနေ့…မြန်မာနိုင်ငံမှာ…စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ…စိတ်ထင်တိုင်းလုပ်ကိုင်နေနိုင်တာအတွက်…အာစီယံ နိုင်ငံ တွေမှာလည်း…တာဝန်မကင်းခဲ့ပါဘူး…အာစီယံက…နေရာပေးခဲ့လို့…အာစီယံက အကာအကွယ်ပေးခဲ့ လို့…စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ…ဒီလောက်အထိ…သက်ဆိုးရှည်နေခဲ့တာပါ…
အဲ့ဒီတော့…ဒုက္ခသည်များပြဿသနာကိုလည်းဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်အောင်…အာစီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ အမှားကို လည်းပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်အောင်…အာစီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့…မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်ဆံမှု တွေကို…လုံးဝဖြတ်တောက်ပြီးတော့…မြန်မာနိုင်ငံကို…အာစီယံအသိုင်းအဝိုင်းကနေ ကျဉ်ပစ်သင့်ပါ တယ်…
မလေးရှားနိုင်ငံထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ …ဒုက္ခသည်များကို…ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး…ကရိကထများလှတဲ့ တတိယနိုင်ငံကို..ပို့တာထက်က…မူရင်းမြန်မာနိုင်ငံကို…ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်စေခြင်းဟာ… အကောင်းဆုံးသော…ဖြေရှင်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့…ယုံကြည်ပါတယ်…
ဒါကြောင့်…မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ…စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားလာအောင်…နိုင်ငံသားများ… အချင်းချင်း…တန်းတူညီမျှသော…အခွင့်အရေးများရရှိလာအောင်….ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အမှန်တကယ်ရရှိလာအောင်…ပြုလုပ်ပေးခြင်းသည်သာလျှင်…ရိုဟင်ဂျာပြသနာ… မြန်မာ မွတ်စလင် ပြဿသနာ…ဒုက္ခသည်ပြဿသနာတွေကို…ဆုံခမ်းတိုင်ဖြေရှင်းတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…တင်ပြလိုက်ရပါတယ်…
This entry was posted on June 4, 2015 at 3:01 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “ရိုဟင်ဂျာပြဿသနာ အဖြေရှာခြင်း… ရာစုနှစ် တဝက်ကျော်လောက် ခွဲခြား..ဖိနှိပ်..ချုပ်ချယ်ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ…အစ္စလာမ်ဖြစ်နေလို့ပါ…”
June 4, 2015 at 3:38 am | Reply
့ကိုယ်က အနီးကပ်လေ့လာရတဲ့ သူဆိုတော့ ခံစားချက်ကို မျိုသိပ်မထားနိုင်တော့သလို ဖြစ်မိတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ထွက်လာပြီး မလေးရှားရောက်ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း၊ သူတို့ရဲ့ စား၊၀တ်၊နေ၊ရေး တွေကို သုတေသန ပြုနေတဲ့ အင်္ဂလန်က အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ ဒီကြားထဲမှာ သုတေသန လုပ်ကြရာမှာ..ရိုဟင်ဂျာတစ်ချို့ရဲ့ မလေးရှားမှာ နေနေရတဲ့ ဘ၀ဟာ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာထက် ပိုဆိုးဝါးကြောင်းသိ့ရှိရပါတယ်။ မလေးရှားမှာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ဒုက္ခသည် အဖြစ်အသိအမှတ်မပြုဘဲ၊ အထောက်အထားမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာနေပါပြီ။
ထိုရိုဟင်ဂျာတွေမှာ အနာဂတ်ပျောက်နေသလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အခွင့်အရေးရဖို့၊ မိမတိုိ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို မိမိတို့ ပြန်ရဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြတာ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးကလည်း စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားပေးသင့်တယ် ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေ ပြောနေတာလည်း ကြာလှပါပြီ။ ကမ္ဘာက ထိုကဲ့လုပ်ဆောင်နေတာဟာ အချိန်ဆွဲနေတတ်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ဘ၀က လုံးဝအနာဂတ်ပျက်စီးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆိုလို ချင်တာက ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို သူတို့ ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊ အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေ အပြည့်အ၀ လုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည် အဖြစ်ထားရှိပြီး၊ သူတို့အနာဂတ်ကို ပျက်စီးနေတာဟာ ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာက ဒီလူတွေဟာ ဒီလို ဒုက္ခရောက်နေတာကို ကမ္ဘာ့ကုလသမ၈္ဂလည်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမ၈္ဂအနေဖြင့် ဘာကြောင့် ဒီလူတွေ မလေးရှားကို ရောက်နေချိန်မှာ ဒုက္ခသည် ကတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ခိုလှုံခွင့်ကတ်ဖြစ်ဖြစ် ကိုင်ဆောင်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်မပေးနိုင်ရတာလဲ။ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတာ မြန်မာအစိုးရကတင် လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ယူအန်ဆိုတဲ့ ကောင်တွေကိုယ်တိုင်က လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ မလေးရှား ယူအန်မှာ အကူအညီသွားတောင်းတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဘယ်နှစ်ယောက် ကျန်းမာရေးအကူအညီရလဲ ဆိုတာ လက်ချိုးရေတွက်လို့ရပါတယ်။
ဒီလို ပညာရေးအားနည်းနေတဲ့ သူတွေ၊ အထောက်အထားမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို နိုင်ငံတကာက ပစ်ပယ်ထားတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ်ကျော်မှ သူတို့ကို တတိယနိုင်ငံပို့တာဟာ သူတို့ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်၊ သူတို့ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးကို အလွန်တရာ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်က လာတဲ့ ချင်းခြောက်သောင်းကျော်ကို မလေးရှားယူအန်ကနေ အမေရိကားနဲ့ ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကို သူတို့ မြန်မာပြည်က လာပြီး သုံးနှစ်တောင်မကြာဘူး၊ တတိယနိုင်ငံပို့ပေးကြတယ်။ သူတို့ ချင်းတွေ လာတယ်ဆိုတာ အကုန်လုံး ဘွဲ့ရ ပညာတတ်တွေ လာပြီး အမေရိကားနဲ့ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ အခြေချတာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် သိရသလောက်တော့ မြန်မာအစိုးရက ချင်းတွေကိုလည်း ပြန်လည် လက်ခံမယ်ဆိုလို့ အခုမှသာလျှင် ယူအန်က ဒုက္ခသည် အဖြစ်လက်မခံဘူးလို့သာ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်မှာ ယူအန်အကြီးအကဲ တကယ်သွားရောက်လေ့လာကြည့်တော့မှ ဒီလူတွေဟာ စီးပွါးရေးအရ ဒုက္ခသည်၊ စီးပွါးရေးအဆင်မပြေလို့ နိုင်ငံထဲကနေ ထွက်ပြေးလာပြီး ဒုက္ခသည် ဖြစ်ကြောင်းကိုသာလျှင် အမြင်မြန်ရလာခဲ့ပေမယ့်၊ တော်တော် နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော် ပြောတာက လူမျိုးတစ်မျိုးကို မုန်းတီးပြီး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ အခု မလေးရှားကနေ တတိယနိုင်ငံပို့နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မလေးရှားမှာ နေလာခဲ့တာ အနည်းဆုံး ၁၅ နှစ်လေလာက် မလေးရှားမှာနေလာပြီးမှ ခုချိန်မှသာလျင် တတိယနိုင်ငံပို့ဆောင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတကာကို မေးခွန်းထုတ်သင့်တယ်။ နောက်တစ်ခုက အခုမြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေကို ယူအန်ကတ်ပေးတာ ကန့်သတ်မှုတွေ ရှိလာတယ်။ ဒါဆို ဒီမြန်မာမွတ်စလင်မ်တွေက ချင်းတွေနဲ့ စာရင် ချင်းတွေထက် ခွဲခြားခံရတဲ့ သူတွေပါ။ ချင်းတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဒေသတစ်ခုမှာ ပြသနာတစ်ခုခု တက်ခဲ့ရင်တောင် သူတို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်တစ်နေရာကို သွားရောက်ပြီး စီးပွါးရေး လုပ်စားလို့ ရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် အဓိကပြသနာ က နိုင်ငံသားမရတာ၊ နိုင်ငံသားမရတော့ ဒီလူတွေ နိုင်ငံထဲမှာ သွားလာလိုလည်း မရ၊ပညာသင်လို့လည်းမရ၊တစ်ခြားဒေသတစ်ခုကို တရားဝင်ပြောင်းရွေ့နေထိုင်လို့ မရတဲ့အပေါ်မှာ ဒီလူတွေ ရတဲ့နည်းနဲ့ ထွက်ပြေးလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီလူတွေ တရားဝင်ပြောင်းရွေ့ခွင့် ရှိခဲ့ပြီး၊ မြန်မာပြည် တစ်ခြားနေရာ တစ်ခုမှာ စီးပွါးရေးလုပ်ကိုင် စားသောက်နိုင်ရင်တော့ ဒီရိုဟင်ဂျာတွေ ချင်းတွေလို ထွက်ပြေးလာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ က ရိုဟင်ဂျာတွေကို ချစ်သလိုဟန်ဆောင်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အများကြီးတွေ့ဖူးတယ်။ မလေးရှားမှာ ယူအန်ကတ်မရှိလို့ တိုက်ပေါ်က ဖြုတ်ကျပြီး သေမလိုဖြစ်တဲ့ လူကိုတောင် သူတို့က ဒုက္ခသည်အဖြစ် သတ်မှတ်မပေးတော့ စာနာမှုလုံးဝ မထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာလှေစီးထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေက မီဒီယာအများကြီးကို ဒီဒုက္ခသည် ကတ်မရတဲ့အကြောင်းကို တင်ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီဒီယာတွေကလည်း ဒါကို အရေးတယူ ဘာမှမဖော်ပြဘဲ၊နှုတ်ဆိပ်နေတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာတွေအခွင့်အရေး ရဖို့ လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်အပြင်ဘက်မှာ အထောက်အထားမဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေလည်း ဒုက္ခသည်အဖြစ် ၊ဒါမှမဟုတ် ခိုလှုံခွင့်တောင်းသူ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့တော့ လိုတယ်။ ဒီကတ်ရှိမှသာလျှင် သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊သွားရေးလာရေးမှာ နဲနဲအဆင်ပြေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးလာနေတဲ့ လှေစီးဒုက္ခသည်တွေကို ခိုလှုံခွင့်ကတ် သို့ ဒုက္ခသည်ကတ်ပေးဖို့ နိုင်ငံတကာက မလေးရှားအစိုးရနှင့် မလေးရှားယူအန်ကို တစ်ခုခုတော့ ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ မလေးရှားအစိုးရက ဒုက္ခသည် ခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့ ယူအန်ကိုခွင့်ပြုမှသာလျှင် ယူအန်ကပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး မလေးရှားအစိုးရအားနိုင်ငံတကာမှ ညှိနိုင်းပေးသင့်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေအနေဖြင့်လည့် ဒါတွေကို အလေးအနက်ထားသင့်တယ်။လှေစီးဒုက္ခသည်တွေ အကြောင်းတော့ ပြောနေပေမယ့် လှေစီးဒုကသည်တွေနား သွားရောက်ပြီး အားပေးစကားတောင် မပြောတတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ဒါတွေစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
June 4, 2015 at 3:43 am | Reply
စာအုပ်ကလေး…တရားဝင်ဖြန့်ချီခြင်းအခန်းအနားကို….မန္တလေးမြို့…၂၂လမ်းက…ကရဝိက် ကဖေးမှာ…ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်….
ညနေပိုင်း…မှာ…တောင်ကုတ်မှာ…ပြည်မတွင်းကနေ…ရခိုင်ပြည်ဘက်ကို ဘာသာရေးခရီးသွား ရာက…လိုင်းကားနဲ့ပြန်လာကြတဲ့…မွတ်စလင်၁၀-ယောက်ကို…ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားတွေက နေ့ခင်းကြောင်တောင် ရက်ရက်စက်စက်…ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ကြား လိုက်ရတာပါဘဲ…
ကျွန်တော့်စာအုပ်ဟာ…မမျှော်လင့်ဘဲ…အတိုင်းအတာတခုအထိ..အောင်မြင်ခဲ့တယ်…လို့..ပြော လို့ရပေမယ့်…လူတွေ…အမှတ်တရ…မရှိတော့ပါဘူး….
တောင်ကုတ်မှာ…အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့…မြန်မာမွတ်စလင်.၁၀ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့… ကမ္ဘာဆုံးတိုင်…မေ့ဖျောက်လို့ရနိုင်မယ့် ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ…..
June 10, 2015 at 3:33 am | Reply
မှန်တယ်… ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီမှန်သမျှအလိုမရှိပါ… ဘင်္ဂါလီကိုရခိုင်ထက်ကို ရိုတွေက ပိုမုန်းပါတယ်….
ဒါပေမယ့် ရောမချနက်…. ဘယ်ဟာဘင်္ဂါလီ ဘယ်ဟာရိုဟင်ဂျာ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း မခွဲခြားတတ်ဖူး… အစိုးရသောက်သုံးမကျလို့ အကုန်ရောနေတယ်… အဲလိုရောတာက မွတ်စလင်မ်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး… ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘင်္ဂလီရခိုင်တွေလည်းပါတယ်… အဲတော့ အစ္စလာမ်မို့လို့ ပြသနာတက်တာပါ ကြည့်မရပါဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ ဖင်ပိတ်ဆက်ငြင်းနေတာ အတော် Racist ဆန်လွန်းတယ်…..